MINNEAPOLIS IYO DULMANAW TOOS! DULMIYOW JOOJI!
Shirkii la sugayey lee maahinoo. Waa shirkii ugu horeeyey ee ay isugu yimaadaan dhamaan dadka ka tirsan Bulshada ay Soomaalidu u bixisay “Minority”. Hiraaboodkii ayaa lagu jarmaaday Golaha Shirarka ee ku yaala Macadka Humphery ee ka tirsan Jaamacada Minnesota. Waxaa Magaalada ka soday shirar badan oo kale oo dadweynihii ay u kala jabeen. Shirkan oo looga hadlayo Qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee wax badan lagu dhibaateeyey Dalweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxaa ka hadlayey Marti sharaf ka kala duwan oo ay inta badani ka yimaadeen Gobolada kale ee Mareykanka. Waxaa shirkaas lagu casumay oo ka soo qayb galay: Professor Eno, Professor, Jaamacada Portland, Aqoonyahhan Abdirashid, Jaamacada San Diego, Professor Asha Abdisamad, Jaamacada New York, Professor Abdullahi Osman,Jaamacada Atlanta, Sheekh C/Rahman Shariif, Sh. C/Rahman Omar. Marwo Saynab Hassan, Mohamud Abuukar, Jaaliyadda Banaadiriga, Marwo Faadumo Hiirad, Marwo Maryan Mohamed, Sheekh Cali Azhar iyo Abwaanka Caanka ah ee Sangub. Waxaa kaloo halkaa wacdara aan la iloobi Karin ka geystay kooxihii kala duwanaa ee qaabilsanaa Majaajilada iyo Bandhig Faneedka: Shariif Jeeg iyo Asxaabtiisa iyo Kooxdii sida aadka u soo bandhigtay Bandhigii hurgufnaa ee ay ka wada qayb qaateen Ahmed asad, Suldaan Ahmed Mohamed Deeq, Badri, Caasha, Indhadeero iyo C./Rahman Eelay. Sh. Jeeg wuxuu ka warbixinayey Qowmiyada Reer xamarka halka ay Kooxda kale ay soo bandhigeen dhibaatada lagu hayo guud ahaan qowmiyadaha kala duwan ee la takooro gaar ahaan Madhibaanka. Waxaase fagaarahan laysku arkay aan iman oo nasoo gaari waayey Xildhibaan Mohamed Hassan Daryeel oo aad looga sugayey Magaaladan. Inkastoo Ururka SIMA ay casuntay oo hawla badan loo maray lana sii qorsheeyey meeshii uu salka dhigi lahaa inta uu joogo Magaaladan ayaa haddana Xildhibaan Daryeel lagu hungoobay imaanshihiisii. Waase laba bariday kala war la’e waxaa kaalintiisii buuxiyey dadyow kalsoo kala safray dacalada Mareykanka.
Waxay ahayd Maalin Sabti ah Maarso 26 2005, Waxaa qorshauhu ahaa in Shirka uu bilaabmo 9:00am oo Golaha albaabada loo furay. Hayeeshee barqo libaaxyeyn iyo intii istoos-toosis lagu jirey ayaa wuxuu shirku si rasmi ah u bilaabmay ilaa 11-dii. Waxaa halkaa ka qiseeyey Xiriiriyaha Shirka ahna Madaxa Ururka ardayda MSSU isagoo ka sheekeynaya taariikhdii Ururka wixii u qabsoomay iyo waxa ay tiigsanayaan mustaqbalka. C/Rahmaan Mukhtaar wuxuu shirkii ku soo dhaweeyey Sh. Ali-Amin Khadar (Indhadeero) si uu u barakeeyo shirka oo uu Aayada Quraan ah ugu furo, Baraarujin iyo Alle ka cabsina uu quluubta dadka u xasuusiyo. Indhadeero ayaa Dadweynihii Adduunka ka yara dhuftay oo Aakhira geeyey.
Sh. C/Rahman Shariif oo aad uga hadlay waxa ay diintu ka qabto quudhsiga iyo in Eebe hortii loo wada siman yahay. Wuxuu yidhi Eebe cidna ma cunsurideeyo, Maalinta la qaawan yahayna Midgaanka, Boonka, Yibirka, Jareerka iwm dhamaantood siku si ayaa loo xukumaa oo cid la sharfayo oo la leeyahay Laandheeraad tahay ee soo hormar ma jirto. Suubanuhu(csw) wuxuu yidhi: “ Qofkii Camalkiisu reebaa oo dib u dhigaa Nasabkiisu kor uma soo qaado. Wuxuu dadweynihii ku guubaayiyey inay caqligooda kaa shadaan oo aysan ku shaqayn caqli ummado hore oo Jaahil ka ahaa Diinta Islaamka.
Sh. C/Rahman Omar ayaa isna ula kala baxay oo dadkii uga qiseeyey siyaabihii kala duwanaa ee Asxaabtii iyo Suubanuhu(csw) ay u tirtireen kala sareynta iyo Quudhsiga. Wuxuu ka warramay sidii Dadkii Madmadoobaa ee Adoonta u ahaa Isla weyntii Qureesh loo karaameeyey ee weliba looga dhigay kuwii dadka ugu sareeyey. Maxaynu anagu maanta ku kala duwan nahay ee aanu u takoornay walaladeen ayuu Shiikhu waydiiyey Dadweynihii. Diintu ma qabto dhuudhsiga aad wadaan, meelna kama soo galo ee Soomaaliyeey Eebihiin u noqda oo ka run sheega waxa aad aaminsan tihiin ayuu shiikhu yidhi. Labadan Shiikh oo Immamo ka ah laba Masjid oo ku yaal Xaafada Soomaalida Magaalada Minneapolis ayaa Soomaalida aad ugala hadlay Quudhsiga iyo Takoorka iyo inuusan raad ku lahayn oo meelna ka soo galayan Diinteena Barakeysan. Allow dhego!
Jazaakumu-Allahu Kheiran markii la boobay ka dib ayaa waxaa lagu sharfay hadalka Madaxweynaha Ururka SIMA Mudane Mohmed Keynaan oo soo dhaweeyey marti sharaftii ka soo qaybgashay shirkan iyo sida ay wakhtigoodii ugu soo hureen iyagoo weliba ka yimid meelo fog-fog. Wuxuu shirka ka salaamay oo uu uga mahad celiyey dadaalka ay wadaan hogaamiyaasha kala duwan ee Ururkan SIMA ee kala jooga Gobolada kala duwan ee Mareykanka, Mogadishu, Hargeisa, Kenya, Jabuuti, Imaaraadka iyo Yurub. Wuxuuna mahad balaaran u celiyey dadweynihii ka soo qayb galay shirka.
Rashiid Farah oo Magaalada SanDiego nooga yimid ayaa Soomaalidii aad ugu fasiray quraafaadka iyo sheeko xariirta ay ku saleysan tahay takoorkoodu. Wuxuu Soomaalidii xasuusiyey oo uu tusaale usoo qaatay waxyaabaha gabood falka ah ee laga galay bulshaduu ka soo jeedo ee Yibraha. Wuxuu na xasuusiyey quraafaadkii la isla dhex mari jirey ee ahayd in aan cidina weligeed arag Yibir dhintay iyo qabrigiisa toona!. Waxaa la oran jirey buu yidhi xanfaley ayaa qaada oo lama arko meydkiisa! Wuxuu Soomaalidii u sheegay inay taasi tahay Jahliga ka ugu weyn ee xataa ay Caqiidada qofku ay ku fasahaadaso. Qowmiyadahan la yasaayi waxaa ay Soomaalida ka heli jireen buu yidhi Cayda, aflagaadada iyo dhega ku hadalka halka ay soomaalidu heli jirtey manaafacaad la taaban karo oo dhinacya badan leh. Waar Soomaaliyeey ma waxaasaad bedel nooga dhigteen buu su’aalay. Waa bedel runtii baas leh!. Wuxuu Rashiid aad ugu dheeraaday siyaabaha kala duwan ee Soomaalida Isla weyni ay u bahdilaan una takooraan dadka walaalahood ah.
Waxaa codbaahiyihii la wareegay Prof. Abdullaahi Osman oo Atalaanta Jamacadeeda naga soo bariidiyey. Wuxuu dadka tusaaleeyey sida uu quudhsigu u xunyahay. Wuxuu yidhi bal ila qaybsada oo qof waliba ka ag fadhiya ha ku yiraahdo: “ Anigu waxaan ahay Bilis, Laandheere ah adiguna waxaan tahay Boon”. Mar keliyaa dadkiiyoo wejiyadoodu shuxayaan, afkooduna gariirayo, qaarna ay hiin raagayaan isla dhawaaqeen. Aamusnaan ka dib ayuu la kala baxay ka sheekeynta siyaabaha kala duwan ee Soomaalida isla qabweyni ay u duraan, takooraan una yasaan dadyow fara badan oo walaalahood ah isagoo Luqada Ingriiska ku khudbaynaya. Wuxuu ka sheekeeyey sida uu Isticmaarkii u sameystay dadyow uu soo rabaayeeyey oo Jidh Madow laakiin Qalbi Cad si ay ugu sii adeegaan oo abad usii fuliyaan amaawiirtiisa isagoon xaadir ahayn. Waxaaban soo xasuustay Abwaankii Belaaya Cas iyo Maansadiisii Aan Ooyee Albaabka ii xidha!.
Wuxuu Prof. C/llaahi aad uga sheekeeyey tirakoobyo badan oo la sameeyey oo lagu ogaaday in dadka la yasaa ay ka tira badan yihiin dadyowga Islaweyn ee ismooday inay ciidaa iyo camaarkaa yihiin. Tirakoobyadaa oo kuwii u danbeeyey ay sameysay Dowladii Milateriga ahayd ayaan cidna la tusin oo sagxada hoosteeda la geliyey si aysan fashilaad iyo baraarug u keenin. Waxaa uu Pro. C/llaahi tusaale u soo qaatay in 60-dii iyo wixii ka danbeeyey ay Goboladii la isku oran jirey Majeerteeniya oo amarka loo eego Shacbiga Soomaaliyeed ka ahaa buu yidhi 11% ay mar walba yeelan jireen 70% Madaxda, Wasiirada iyo Manaafacaadka Wadanka. Xoogaa ganuus, rayn iyo guux ayaa xagga dadweynaha laga dareemay, markaasuu Abdullaahi ku sii adkeystay in waxan uu akhrinayaa aysan ahayn hadalkiisa ama iska dheh ee ay tahay wax xaqiiq ah oo jirta oo cidii u baahani ay ka heli karto Matxafyada iyo buugaagtii laga qoray. Hadalkiisii buu sii watay isagoo kusii dheeraaday kala faquuqa iyo is duleysigii ka jirey Soomaaliyadii Hore.
Waxaa dhextaal laga dhigay Majaajilo, Maanso iyo Maaweelo ay soo bandhigeen Shariif Jeeg iyo Asxaabtiisa. Waxay si maad ah oo xikmadi ku dheehan tahay ugu soo bandhigeen dadweynihii Asalka Reer Xamarka, Deegaanada uu dego iyo sidii ay Xoriyada ugu soo halmagameen. Wuxuu Shariif Jeeg halkaa ka sheegay bal inay Soomaalidu dib u xasuusato magacyadii Halgamayaashii SYL ee 13-ka ahaa iyo inay ka soo helaan magac qalafsan oo adag.
Waxaa misna hadalkii qabsaday Prof. Omar Enow oo ka soo jeeda Qowmiyada Jareer Weyn. isna door biday inuu Ingriis ku warramo ilaa dad badani ka codsadeen inuu Soomaali ku hadlo si ay iyaguna jaanis ugu helaan inay markooda qosol la fuuraan. Prof. Eno oo aad u yaqaana siyaabaha kala duwan ee Soomaaligu wax u caayo una takooro ayaa weydiiyey Dadweynihii meesha isugu yimid sababta ay dadka Jareeta ah u caayaan har iyo Habeen! Wuxuu isweydiiyey bal inuu Soomaaligu Sanka Weyn iyo Timaha Jadheedhta ah uu u ciil qabo oo uu dooni lahaa inuu wax ka helo! Waa yaabe buu yidhi haddii aad qurux badan tihiin oo aad isla weyn tihiin, maad isku kalsoonaataan maxaad noogusoo gurya noqonaysaan: Bal eeg Jareerkan, Bal eeg sankiisa, bal eeg timihiisa, Belaayo murqa kuus-kuusan. Haddee ma qaraar baa idinka haye see wax u jiraan! Maxay idiin tareysaa caydan aad caynaysaan Jareerka, Midgaanka, Raxanweynta iyo Reer Xamarka? Tolow ma xoogaa niyad dhis iyo niyad qaboowsi (relief) baad ka heleysaan miyaa!. Prof. Eeno oo ah nin aad u maad badan oo hadalkiisa uu aad u cad-cad yahay, Somaaligu necebaa hadalka hurgufan, ayaa dadweynihii ka dhigay wax yaaban, wax madaxa ruxaya iyo wax iska qoslaya oo afka kala haya.
Wuxuukaloo ka sheekeeyey sida loo jecel yahay ee loogu nacamleeyo marka qofku wax barto, lacag yeesho ama uu jago heer sare ah haysto. Waxaa dadkii ka yaabiyey markuu yidhi: “ Weligaa Soomaali ma weydiisay waxa uu yaqaan ama soo bartay ama uu waddankiisii iyo dadkiisii u qabtay? Jawaabtu waa inuu ku faano nin kale oo qaraabadiisa ah oo Tacliin leh, Maal leh, Derejo leh ama Jago haysta”. Wuxuu Soomaaligu oranayaa; “ Hebel ma garanee inaadeerkey waaye noo! Intaas wuxuu isleeyahay ha lagugu ciseeyo ama wax ku hel”. Wuxuu Eenow yidhi inay ka wacnaan lahayd inuu isagu is faaniyo oo wax barto intuu qof kale ku irsaaq doonan lahaa! Ishaad ka ridey Macallinka!
Wuxuu halkaas ka cadeeyey inuu yahay ninka u ololeeya Somali Bantu oo uu keenay dad kaban 13,0000 oo qof Mareykanka. Waxaan aad ugu dedaalaa buu yidhi oo har iyo habeenba u soo jeedaa sidii aan wax u bari lahaa oo horey ugu dhigi lahaa dadka Bantuga ah. Waxaan ku dedaalayaa buu yidhi inaan helo dad badan oo Jareerka oo ilaa heer PHD gaara inaan helo mustaqbalka dhow. Intaa markay afkiisa ka soo baxday ayaa Shariifku ka dhex qayliyey dadweynaha dhexdiisa: “ Xagey la aadayaan! ?”. Ismalurre Eenow ayaa si debecsan ugu jawaabay: “ Ma aragtidoo ninka Seneterka ah ee Gobolka Illinois ka soo galay Aqalka Odayaasha! Jareer Reer Kenya ah oo Jalwa ah waaye noo! Adduunkana xagee maanta laga wadaa? Mareeykan lee maahinoo! Adiga iska noqo anagana halkaanaa Remote-ka kaaga haynaa, halkaanaa kaa koontarooleynaa! Sidaan rabno adigaaba iska yeelaaya baryo la’aan! Qosol aan kala go’ lahayn ayaa ku xigay!
Wuxuu ku soo gabagabeeyey oo Soomalida ugu baaqay inay ka faaiideystaan dadka ay Yasayaan si ay fakhriga uga baxaan oo loo baro sida Beeraha loo fasho, Guryaha loo dhiso, Kabta loo sameeyo, Dadka loo daaweeyo iyo sida cunto nafaqa leh loo sameysto. Xayeesinimadaa ka bixi lahaydeen noo!
Abwaan Sangub oo ah Abwaanka har iyo habeen u soo taagan qadhiyada la dagaalanka Quursiga ee aad uga soo qayb gala golayaasha iyo shirarka looga hadlayo quudhsiga iyo takoorka ayay haatana tahay markiisii(tookadiis). Abwaanku wuxuu Professor-dii ku canaantay inaysan ku hadlin Afkoodii Hooyo oo ay jiraan dad badan oo aysan gelin waxay shubayeen. Abwaanku wuxuu had iyo jeer ku baraarujiya Soomaalida inaysan ku habsaamin sheeka xariirta ay ku habsaameen awoowayaashood. Wuxuu inta badan ku canaantaa Soomaalidu inaysan daacad ka ahayn waxyaabaha ay qabanayaan ama ay ku hadlayaan. Wuxuu ku booriyaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb gala shirarka iyo kuwa soo abaabulayba in afkooda iyo uurkoodu uu is waafaqo. Inta badan waanadiisu waxay ku saabsan tahay in layska daayo Munaafiqnimada oo runta laga sheegaan waxa uuka yuurura ee buux dhaafay. Hadaladiisu waxay ku soo gabagabeysmaan in Quudhsiba uu dhamaan lahaa haddii inta ay indhihiisu arkayaan ee soo hor fadhida ay daacad yihiin. Runtaa dheh!.
Abwaanku wuxuu halkaa ka tiriyey Maanso aad u yaab badnay oo guud ahaan ka hadlaysa takoorka iyo quudhsiga lagu hayo qayb ka mid ah Bulshada Soomaaliyeed. Wuxuu ku xijiyey Gabay Alla bari ahaa oo uu Eebe, Diinta iyo Suubanaha ku amaanayo. Maansadiisii hore ee Abwaanka ka akhri halkan [qaylodhaan].
Asha Abdisamad oo ah Halyeeyad Soomaaliyeed oo Maamule ka ah Hay’ad u dooda Xuquuqda Aadanaha waxna ka dhigta Jaamacad ku taala New York ayaa markana u baxday. Asha ayaa aad uga sheekeysay sida ay Soomaalidu u sheegtaan Muslinimo iyo sida ay u xaqiraan una quudhsadaan walaalahood kale oo Muslimiin ah. Waxay tidhi: “miyeysan taasi ahayn Af iyo Uur is khilaafsan? Miyeysan ka faaiideysan sida iyagiiba maanta meel walba loogu takoorayo oo aysan marna xusuusan wixii ay ku hayn jireen ilaa maantana ku hayaan dadka walaalahood ah? Miyaan wax laga naxa oo laga yaqyaqsooda ahayn marka ay takoorkooda cadayn uga dhigayaan bakhti bay cuneen? Miyeysan Soomaalidu caqliga kaashaneyn?” Waa hadduuba caqli jiro Caashooy!
Pro. Asha ayaa xataa la yaabtay fara badnaanta cunsuriyada ku jirta Soomaalida iyo sida ay Soomaalidu u yasto walaalahood ku dhashay Kenya ee ay u bixiyeen SUJUWI. Waa wax aan anigu u fahmay bay tidhi in Soomaaligu ay farad iyo waajib ku tahay inuu wax cunsurideeyo, wax quudhsado ama wax caayo. Prof. Caasha waxay kusoo gabagabeysay inay Soomaalidu iskaashadaan oo midoobaan gacmahana is qabsadaan. Bal eega ayay tidhi inta Soomaali ah ee ku nool Gobolkan! Haddii intaasi ay ul iyo diirkeed noqdaan siyaasada iyo majaraha Gobolkan Minnesota qayb lixaad leh ayay ka qaadan lahaayeen. Waxay kama danbaystii halkaas ka akhrisay qodobo dhowr ah oo ay dalalka Adduunkoo dhami wada saxiixeen oo ku saabsan ilaalinta Xoriyada, Sharafta, Maalka, iyo Sinaanta qofka bini’aadamka ah.
Reer Arlaadii baan ahay oo Madhayta iyo Moora gaabey (Xudur) ayaan ka imid, waalidkeyna Eebahay waa ka nabad gelieyey dhibaatada quudhsiga ah ee dadyow badani ay garan la’ yihiin sidii ay qalbigooda uga saari lahaayeen ayay tidhi Maryan Mohamed oo hadalka u baxaday. Waxay aad uga sheekeysay Berisamaadkii iyo sidii wanaagsanayed ee ay dadku isku ahaayeen iyo sida ay maanta belaayadu uga dhex taagan tahay. Waxay aad uga sheekeysay sidii qayaxnaa ee Raxanweynta loo quudhsan jirey: Daba Rogoto, Garam-garam, Tima adag, Wanlaweyn, Haatooy iwm. Waxay ku soo gabagabeysay in ay Soomaalidu is ixtiraamto isuna naxdo isna quudhsan si ay horumar u tiigsato.
Saynab Hassan oo ah ardayada keliya ee wax ka barata Humphery Institute ayaa ka sheekeysay qadiyad iyo siyaasad xumada Soomaalida. Waxay si aad ah u bidhaamisay sida ay dadyowga adduunku isu ixtiraamaan iyagoo aad ugu kala duwan marka laga eego dhinacyo badan: Diin, Dhaqan, Af, Midab iyo Degaanba. Laakiin waxay nasiib xumo ku sheegtay in maanta iyo qarnigan aanu joogno aanu daliil uga dhigno takoorka walaalaheen sheeko xariir uu nin diintiisa iyo tii adduunkaba jaahil ka ahi uu noo soo gudbiyey. Waxay tidhi iyadoo la yaaban sida ay dadku ugu dhegan yihiin quraafaadkaa:”Belaayadu ma diinbaa, la jecelaa”!
Waxaa dhextaal laga dhigay Bandhig Faneedkii lagu soo bandhigay ay wadeen Quudhsiga iyo Takoorka Soomaalida. Waxaa loo jilay si aad loola yaabay oo laga soo bilaabay Abtirsiinyo Reeraha isla weyni ay gelayaan ilaa iyo Carabta iyo Jareerta, Midgaanka, Digil iyo Mirif iyo Reer Xamarka oo meelna u saari waayey Abtirsiintoodii. Kadib waxaa halkaa lagu soo bandhigay Sheeka Xarrirta caanka ah ee uu Ajigu u adeegsado takoorka Midgaanka ee ahayd Sheekadii Bakhti cunka. Waxaa run ahaantii halkaa lagu soo bandhigay dhibaatada, cayda, dilka iyo guhaadkai uu ilmaha yar ee Midgaanka ahi la kulmo marka uu dhasho ilaa inta uu ka dhimanayo. Waxay dadweyne badani u ahayd wax ay aad ula yaabaan dhibaatada lagu hayo dadkaa walaalahood ah. Riwaayadaa yar markii ay gabagabo joogtay ayaa waxaa buraanbur aad loogu riyaaqay halkaas ka tirisay gabadha sida wanaagsan u jishay Bandhig Faneedka ee Caasha(Naga suga Buraanburka). Waxaa isna halkaa ka tiriyey gabay ay dadkii la hooriyeen Axmed Asad. Asad sidii uu gabayga ugu luu qeynayey ayuun buu mar qudha ka rogoo laba u saaray: “Hoobaalayey heedhe, Hoobaalayeey heedhe” Waa la baashaalay! Gabaygii Ahmed Asad ka akhri halkan gacaltakoor.
Waxaa halkaa isna khudbad aad u qiima badan ka soo jeediyey Mudane Mohamed Abuukar oo ah madaxa Jaaliyada Banaadiriga. Wuxuu aad aga sheekeeyey doorka uu Reer Xamarku ku lahaa Xoriyadii Soomaaliya iyo sida ay u ahaayeen dad soo jireen ah. Wuxuu qiray sida ab-ka ab u deganaan jireen Xeebta dheer ee ku teedsan Badweynta Hindiya wuxuusae maxamed iska dheereeyey hadaaqa ay maant Soomaalidu isugu sheekeyaan ee ah in Beesha Banaadirugu tahay soo galooti dhowaan yimid wadanka. Wuxuu xusay tacadiyada faraha badan ee loogeystay dadkan maadaama ay ahaayeen qowmiyad aan hubeysnayan. Waxaa kaloo oo si wanaagsan u sharxay quudhsiga iyo midab takoorka loo geysan jirey oo ay ugu horeysay magic loola baxay ee ah Gibil Cad. Waxaa jirtay buu yidhi fikrado khaldan oo laga haystay Reer Xamarka oo ay Soomaalidu iska dhaadhicisay oo ay ka mid ahaayeen in Reer Xamrku ay ahaayeen dad aan nadiif ahay oo wasakh badan oo soo uraya. Inkastoo wixii Soomaaliya ka dhacay ay dhibaateeyeen dad fara badan, haddana Reer Xamarku wuxuu ka mid ahaa Qowmiyada sida aadka loo dhibaateyey maadaama aysan hubeysney lahayna cid la bah ah oo usoo hiilisa.
Hooyadu waa aasaaska nolosha iyadaana wax hagaajisa iyadaana wax bi’isa. Hadday Hooyadu dhaqan suuban, cadaalad iyo sinaan ku barbaariso ubadka soo koraya dhibkaniba ma dhaceen ayay tidhi Faadumo Hiirad. Hooyadu waa lama huraan waana macallinka ugu horeeya ee uu ilmaha yari leeyahay. Markaa wxaan kula talinayaa Hooyooyinka in ay carruurtooda ku ababiyaan akhlaaq Islaami ah oo aan durid, xaqirid iyo quudhsi midna lahayn! Amiin!
Waxaa hadalkii u baxay Ali Azhar oo isagu aad u iftiimiyey dhulkan Soomaaliya iyo dhibanayaasha waxa ka dhexeeya. Wuxuu aad u sharxay taariikhdii hore ee Soomaaliya iyo boqoradii soo xukumi jirey, ilbaxnimadoodii iyo sidii ay Awoowayaashii Soomaalida maanta joogtaayi ay isu bahaysatay si ay u jebiyaan Boqortooyadii Beydariga ee ka talin jirtey dhulkii Boonta. Wuxuu halkaa ka cadeeyey in sidii Boqortooyadaa da’da weynba laysugu tegey quruuma hore ay haddana Soomaalida maanta joogtaayi ay isugu tageen Boqortooyadii Ajuuraanka ilaa ay dhulkiiba ka eryeen. Wuxuu ku kaftamay in Madhibaanku nasiib lahaa maadaama aan xadka la talaabsiin, laakiin la qaybsaday oo Qabiil weyniba in xereystay si ay sancadeey yaqaaneen uga faaiideystaan. Wuxuu dad weynihii in Soomaalida awoowayaashood ay ilaa ka samaan ka samaan ay Reer Guuraa ahaayeen, shaqana aysan ku lahayn ilbaxnimo iyo magaalo. Waayo buu yidhi Soomaaligu wuxuu ku jiraa duurka oo marba meeshii daaq leh buuba aadaa, ilaa maantana Soomaalida inteeda badani weli waa Reer Guuraa. Haddaba waxaan idin su’aalayaa buu yidhi yey ahaayeen dadkii ay Faraaciyiintii usoo doonana jireen fooxa, hargaha, baal goroyada? Waxaa xaqiiqa ah inuusan Soomaaliga maanta dhulka nagu haysat ee na takoora uusan kaasi noqon Karin waayo maantuusan Soomaaligu magaalaba shaqo ku lahayn oo uusan garaneyn ugaarsi, beer, kalluun, dhismo, sanco iwm. Haddaba aan idiin jilciyee buu yidhi dadkan aan ka sheekeynayaa waa dadka aan magacyada badan u taqaanaan sida Gabooyaha, Madhibaanka, Yibirka, Midgaanka, Boonka iwm. Anagaa weli ugaarsana, sancada sameyna, hargaha farsameyna, wax daweyna, wax gudna, wax ka umulina. Soomaaliyeey na ixtiraama oo noo qila libinta aanu leenahay! Soomaaliyeey wax badan baad duugteen taariikhda dadkan aad quudhsataan si aysan isu garan, laakiin maanta waa la soo faagay oo boodhkaa laga jafay oo Ahraamtaa laga soo akhriyey ee idinka uun ha Aakhira seegina ayuu ku soo gabagabeeyey.
Waxaa ka dib furmay su’aalo iyo Jawaabo sida darandooriga laysu weydaarsanayey iyadoo Golihii markan uu aad usoo buuxsamay oo dad meesha ka tegay ay Fadhi ku Diriryada ka sheegeen alaabateeshinka meesha ka socda!
Naftaada waxaad la neceb tahay maxaad ula jeclaatay ta walaalkaa!
Akhri: Minneapolis oo noqotay Mbagathi-dii Mareykanka(Q.1-aad)